Tratry ny Morozov - fametrahana, famantarana ny fampiasana. Ahoana ny fomba hampidinana an'i Morozov?
Tratry ny Morozov - ahoana no fomba hanomanana sy hampiharana tsara ny fanafody?
Ny fandanindaniam-poana sy ny reraka dia misy fiantraikany ratsy amin'ny torimaso sy ny fihetseham-po. Ny sedra dia manampy amin'ny fiatrehana ny adin-tsaina. Amin'ny tranga marim-pototra dia vonona ny hampiasa fanafody voajanahary mifototra amin'ny herisetra, ohatra, ny vahaolana Morozov. Mendri-pihetseham-po mamaivay izy io, ary misy fiantraikany eo amin'ny lozam-pifamoivoizana.
Tratry ny Morozov - fananganana
Ny fitsaboana amin'ny fomba ofisialy no voalaza fa voaomana amin'ny sigara ary tsy omena afa-tsy amin'ny torohevitry ny dokotera. Izany dia noho ny zavatra iray izay ahitana ny fametrahana an'i Morozov, izay ahitana ny Dimedrol. Voarara fotsiny amin'ny ordinatera izy io noho ny vokatry ny nify (rehefa ampiasaina amin'ny dosage lehibe). Ny endri-tsoratr'i Morozov tanteraka:
Tolo-tsakafo misy valerian;
Ny rongony avy amin'ny zava-mahadomelina dia tsy misy fiantraikany amin'ny fatran'ny trosa ao amin'ny taratra cerebral, ka tsy miova ny fahaizana ara-tsaina sy ny haavon'ny fihetseham-po. Ny hetsika ara-panafody ao amin'ny singa tsirairay dia ahitana:
fanamaivanana ny matory;
manatanjaka ny fihenan'ny rafi-pitabatabana;
fanalefahana ny fientanam-po;
fanitsiana ny fizotry ny alahelo ao amin'ny ampahany subcortique ao amin'ny atidoha;
fanasitranana ny torimaso ara-batana;
mihena ny fahatsapana ho an'ny mpaniratsira ivelany;
ny fisamborana ny tanana sy ny rantsan-tànana;
ny fihenan'ny tsiranoka amin'ny tsinay.
Tratry ny Morozov - mari-pamantarana ampiasaina
Ny singa rehetra amin'ny zava-mahadomelina dia manana toetra voajanahary, mampitony ny rafi-pitabatabana, mampihena ny torimaso ary mampihena ny tsindry. Misy karazana sahona toy ny moronovan'i Morozov. Noho ny fihetsika mifangaro amin'ireo singa mavitrika, ny vokany dia mihamitombo sy mihabetsaka kokoa. Toy izao manaraka izao ny famakiana ireo horonantsarin'i Morozov:
ny tsy fahatanterahan'ny natiora maharitra na maharitra;
otrik'aretina sy vaksiny;
mitombo ny fiterahana;
fisalasalana tsy misaina;
panàka sy ny fanafihana amin'ny atidoha (toy ny fitsaboana arifomba);
Fanafihana ny fihokoana;
hormonaux malgaches, miaraka amin'ny fiovan'ny toetr'andro;
syndrome maloto ;
fampitomboana aretina mitaiza amin'ny aretina;
Tratry ny Morozov - fiantraikany hafa
Ny solosaina napetraka dia mifototra amin'ny singa fototra, noho izany dia tsara ny mandefitra. Ny tsiron-tsakafo ao Morozov dia tsy dia fahita firy, indrindra raha betsaka loatra ny dosage nomena azy, ka tafiditra amin'izany:
fahasimbana ny fahafahana mifantoka.
Tratry ny Morozov - fanoherana
Ny ankabeazan'ireo singa entin 'ny vahaolana voavolavola dia tsy misy fifanolanana. Ny tsangana Morozov dia matetika voaomana ao an-trano ary tsy ahitana Diphenhydramine, noho izany dia ankatoavina ny fampiasana azy na dia olona tsy afaka mampiasa io zava-mahadomelina io aza. Ny hany tokana henjana amin'ny fanafody dia ny tsy fisian'ny fanafody misy ny zava-mahadomelina, anisan'izany ny alikaola. Miaraka amin'ny fikarakarana, miala sasatra i Morozov amin'ny vehivavy bevohoka sy mihomehy, tsara kokoa ny mijery amin'ny mpitsabo iray mialoha. Ankizy latsaky ny 14 taona dia tsy mety ny manome vahaolana.
Ahoana no ahafahan'i Morozov hody any an-trano?
Ny voaaro voajanahary dia azo atao amin'ny tenanao manokana, mila 5 minitra fotsiny dia ho mora vidy. Ny hany zavatra manavaka ny pharmacy sy ny rotsak'i morozov - ny prescription amin'ny tranga faharoa dia tsy ahitana Diphenhydramine. Tsy misy fiantraikany eo amin'ny toetra mampiavaka ny zava-mahadomelina ity, fa mihasimba kely sy mora kokoa. Ny safidy voalohany, ny fomba hanomanana ny fikajiana an'i Morozov, dia heverina ho tsotra, mila mandoko 25 ml amin'ireto sary ireto ianao:
Ny fomba faharoa, ny fomba hanapahana ny fako ao Morozov ao an-trano, dia ahitana singa fanampiny iray - fanasan-tongotra mpanodina iray. Zava-mahadomelina mahafinaritra izany, izay manampy amin'ny fanafoanana ny tsy fahitan-tory. Amin'ity tranga ity, miovaova ny sombin-tsakafo:
hawthorn - 1 ampahany;
motherwort - 2 partie;
Valeriana - 2 tapitrisa;
peony - 1 ampahany;
Corvalol - 1 ampahany.
Tratry ny Morozov - fampiharana
Raha omena ny zava-pisotro misy alikaola ao anatin'io fanafody io, dia soso-kevitra ny haka azy io rehefa avy misakafo na maivana kely. Alohan'ny handoanao ny dipoavatra Morozov, mila manala azy ireo amin'ny rano mangatsiaka ianao amin'ny alàlan'ny toetr'andro. Fitomboana miavaka - 50 ml isaky ny rotsak'aina ho an'ny 20-25 isan-jaton'ny zava-mahadomelina. Raha raisina voalohany ny vahaolana, tsara kokoa ny mampiasa ny habetsahatry ny zava-mahadomelina hanamarinana ny fahamendrehana sy ny valin'ny vatana amin'ny vahaolana vahaolana.
Tratry ny Morozov - dosage
Ny doka tokana amin'ny zava-mahadomelina dia miankina amin'ny tanjon'ny fitsaboana. Ny isa isan'andro isam-bolana. Trinketsin'i Morozov - firy ny fisotroan-drongony:
amin'ny tsy fahitan-tory - 40 pcs. (afon-drano ao anaty vera rano) 1 ora alohan'ny hatory;
Amin'ny alahelom-pifaliana, ny fientanam-po miredareda - 10-20;
miaraka amin'ny fitomboan'ny tsiranoka - 30 pcs.
Hafiriana no azonao entina mandona Morozov?
Na dia tsy azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra aza ny fanafody voajanahary, dia mety hitarika ho amin'ny fihetsika tsy mahazatra sy ny fiankinan-doha amin'ny voka-dratsiny izany. Ny sombin-tsolosaina (mozika) ao Morozov dia soso-kevitra ny hisotro tsy mihoatra ny 2 herinandro. Taorian'ny fitsaboana, tokony hatao ny fialana lava, eo ho eo 1.5-2 volana. Alohan'ny hakana indray ny morozov dia tsara ny manatona dokotera. Raha ilaina ny fampiasana tsy tapaka ny sedanina, tsara kokoa ny misafidy fomba fiasa mahery vaika kokoa.
Tratry ny Morozov - analogy
Na izany aza, ny iray amin'ireo singa ao amin'ilay vahaolana voafaritra dia azo ampiasaina manokana. Ankoatra izany, ny fampidiran-dratsin'i Morozov dia mora hosoloin'ny medikaly hafa amin'ny herisetra miaraka amin'ny vokatra mahatsiravina sy mihatsaravelatsihy:
Mpiasan'i St. John;
drariny Zelenin sy ny hafa.
Chernovrivtsy - fananana medikaly
Siropatoana voanio voankazo - fananana mahasoa sy fanoherana
Mahasoa tokoa ny menaka voanio, ahoana ny fomba hisafidianana sy hampiasana azy tsara?
Posy solika ho an'ny tarehy
Prince Charles dia nifamaly tamin'ny zananivavy vavy Anna
Fivarotana fialan-tsasatra - ny tsiambaratelon'ny safidy tsara ho an'ny fialan-tsasatra
Goose fat - toeram-pitsaboana sy fampiharana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Afaka manome sakafo cookie ho an'ny reniko ve aho?
Bursitis amin'ny voditongotra - inona io?
Ahoana ny fomba hanaovana safidy tsara?
Famindrana ny fibrôzôzôma amin'ny trondro madinika
Inona no tokony ataoko raha ovay aho?
Tao anaty trano kely
Cate Blanchett sy Oscar-2016